मास्क प्रयोग गर्नेको शरिर बिस्तारै भाइरस विरोधी बनिदिन्छ – विज्ञान जर्नल « Bikas Times
मास्क प्रयोग गर्नेको शरिर बिस्तारै भाइरस विरोधी बनिदिन्छ – विज्ञान जर्नल
काठमाडौं । मास्कमा मसिना छिद्र हुन्छन्, जसबाट भाइरस त प्रवेश गर्न सक्छन् तर पानीका मसिना कण प्रवेश गर्न सक्दैनन् । भाइरस संक्रमितको सम्पर्कमा आइरने मानिसहरुले मास्क प्रयोग गरिरहँदा त्यस्ता पानीका मसिना कण मास्कमै टाँसिन पुग्छन् । केही थोरै संख्यामा मात्रै भाइरसहरु शरिरभित्र प्रवेश गर्छन् । ती कम संख्याका भाइरसहरुलाई शरिरको प्रतिरक्षा प्रणालीले नष्ट गरिदिन्छ । नयाँ भाइरसको शरिरभित्र प्रवेश गरेको थाहा पाएपछि शरिरले एन्डिबडी उत्पादन गर्न थाल्छ ।
कम संख्याका भाइरस प्रवेश गर्दा त्यसै पनि शरिरलाई हानी गर्दैन, तर शरिरले भने नयाँ एन्टिबडी उत्पादन गर्न चाहिँ थाल्छ । यो क्रम चलिरहँदा नयाँ भाइरसविरुद्ध शरिर तयार हुन थाल्छ र कुनै पनि बेला ठूलो मात्रामा भाइरस शरिरभित्र प्रवेश गरेरमा इम्युन भइसकेको शरिरमा कुनै असर गर्दैन ।
जस्तो कि पहिले पहिले ठेउला रोगको खोप आउनु अघि मानिसहरुले निरोगी मानिसको शरिरमा धातुले चोट लगाउँथे । त्यसबाट सामान्य घाउ र सामान्य संक्रमण हुन्थ्यो । त्यो संक्रमण निको पार्न शरिरले उत्पादन गर्ने एन्टिबडीले ठेउला हुन दिँदैन थियो ।
अहिले केही वैज्ञानिकहरुले यहि फर्मूला मास्क प्रयोग गर्दा कोरोना भाइरसविरुद्ध काम गर्ने दावी गरेका छन् ।
न्यु इन्ग्ल्याण्ड जर्नल अफ मेडिसिन, मोनिका गान्धी र जर्ज डब्लु रदरफोर्ड अफ युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बीचको सम्वादका क्रममा बैज्ञानिकहरुले यो तर्क अगाडि सारेका हुन् ।
ठेउलाविरुघ धातुले घाउ बनाउने विधिलाई चिकित्सा विज्ञानमा ‘भाइरोलेसन’ भन्ने गरिन्छ । त्यही भाइरोलेसनको काम मास्कले गर्ने उनीहरुको विश्वास हो ।
कोरोना देखाएर हत्या गरियो –आफन्त
काठमाडौं । केन्द्रीय कारागारका कैदी रामलखन जैसवालको मृत्युको विषयलाई लिएर आफन्तहरु आक्रोशित भएका छन् ।
गूल्मी काग्रेस सभापति आक्रमणमा स्थानीय प्रशासनको नियतमा खोट
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलले पार्टीको जिल्ला कार्यसमिति गुल्मीले सोमबार स्थानीय मुद्दाका बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा
तीनधारा झरना अवलोकन गर्न जाने कसरी काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिका
पहिले गाई बाख्रा चराउन र घाँस दाउरा गर्न जाने स्थानीयको मात्र भेटघाट हुने गरेको काफलडाँडामा
झण्डै ५ सय प्रहरी निरीक्षकहरुको सरुवा : हेनुर्स को कहाँ पुगे
प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीको ५ असोजको निर्णयबाट नेपाल प्रहरीका ४८८ जना प्रहरी निरीक्षकहरुको सरुवा
तपाइको आज अर्थात २०७७ असोज ७ गतेको राशिफल
मेष- साझेदारी काममा प्रगति हुनेछ । यात्रामा सास्ती हुनेछ । प्रेममा प्रगति रहनेछ ।वृष- प्रतिष्पर्धामा जीत हुनेछ
गोविन्द केसीमाथिको अभद्र व्यवहार बन्द गर्न डा शेखरको माग
सत्याग्रहमा बसेका डा. गोविन्द केसीलाई प्रहरीले अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले